Magome Bunshimura aterlọ ihe nkiri nke 2020 | Ota Ward Cultural Promotion Association
Omelọ ihe nkiri nke Magome Bunshimura>
Omelọ ihe nkiri nke Magome Bunshimura 2020
Magome Bunshimura aterlọ ihe nkiri nke ememme 2020 Video Edition "iche echiche"
Na 2020, eyigharịrị ihe omume ahụ n'ihi mmetụta nke Corona, mana anyị mepụtara vidiyo vidiyo emere na ebe dị iche iche na ngalaba ahụ na ebumnuche nke ịgbasa ohere nke mmemme ụlọ ihe nkiri na amara nke "Magome Bunshimura".
Versiondị vidiyo "Stage imagin" trailer (sekọnd 38)
Ọrụ / Soro omenka
"" Magome Bunshimura "aterlọ ihe nkiri" / Hiroshi Shimizu (onye na-atọ ọchị / onye na-eme ihe nkiri)
Nchịkọta uri egwu uri egwu "Circus" (Original: Chuya Nakahara) / CHAiroiPLIN
"Otu Puku na Otu Akụkọ nke Abụọ" (Mbụ: Taruho Inagaki) / Redio Japanese
Yomi Shibai "Onye isi nke kpakpando" (Original: Saint Degujuperi Translation: Rin Naito) / aterlọ ihe nkiri Ort
"Fantasy Village" (Original: Shiro Ozaki) / atriclọ ọrụ nkiri Yamanote Jijosha
"Gbasaa" (Original: Yasunari Kawabata) / aterlọ ihe nkiri Yamanote Jijosha
"Mitsu no Awa" (Original: Saisei Murou) / atriclọ ọrụ nkiri Yamanote Jijosha
Arịrịọ maka nkwado
Anyị akwadebewo windo onyinye inye onyinye maka nkwado gị na nkwadebe maka emume nkiri nkiri mbụ emere maka Disemba 2021.
A ga-eji onyinye a chịkọtara dị ka akụkụ nke mmefu ọrụ.
Nkwado na igwe mmadụ
"Magome Bunshimura aterlọ ihe nkiri nke Ememe" Achọrọ m ịkọ akụkọ ihe mere eme nke akwụkwọ na obodo site na ọrụ mpaghara nke akwụkwọ na ọkwa!
Nwere ike ịhọrọ site na yen yen, yen 1,000, yen 3,000, na yen yen 5,000.
Okwu mmalite nke ngwaahịa nloghachi
Na mgbakwunye na ozi ịkele sitere na mkpakọrịta anyị na "Bunshimura Guidebook" nke Ota Ward bipụtara, ị nwere ike ịnụ ụtọ mmemme nke otu ọ bụla na-arụ ọrụ ewepụghị na vidiyo vidiyo a "Magome Bunshimura Theater Festival 2020 Video Edition imaginary Stage". DVD ndị pụrụ iche , ngwongwo mbụ, wdg. na-eme atụmatụ.
Ruo Fraịdee, Eprel 30
* A ga-etinye usoro a site na usoro All-in.Ọbụlagodi na ịnweghị ọnụego gị, anyị ga-eme atụmatụ ahụ wee weghachite nloghachi ahụ.
Pịa ebe a maka nkwado nke igwe mmadụ
E nyere ndi Ota Ward Cultural Promotion Association ozugbo
A ga-ele onyinye dị na Association ahụ anya dị ka onyinye nye ụlọ ọrụ na-akwalite ọdịmma ọha na eze pụrụ iche ma nata ụtụ isi.
Banyere ihe mgbakwunye ụtụ isi maka onyinye
<N'ihe banyere ụlọ ọrụ> Enwere ike iwepụ ya dị ka mwepu iche iche na mwepu mmachi nke onyinye izugbe.
<Ndi mmadu> I gha tozuru oke inweta ego.
Maka nkọwa gbasara usoro ụtụ isi inye onyinye, biko lee weebụsaịtị NTA, wdg.
Corpolọ ọrụ abụọ na ndị mmadụ n'otu n'otu kwesịrị itinye akwụkwọ nkwụghachi ụgwọ iji nweta ọgwụgwọ dị elu karịa.Mgbe ị na-edebanye nloghachi ụtụ gị, ị ga-egosi ego azụmahịa enyere ndị otu gị.
Maka ozi gbasara otu esi enye onyinye, biko kpọtụrụ anyị na adreesị dị n'okpuru.
Pịa ebe a maka nkọwa gbasara onyinye
Ajuju / Ngwa
Enwee Mmasị Ọha na Ọha na Ota Ward Cultural Promotion Association Management Division TEL: 03-3750-1611
Omelọ ihe nkiri nke Magome Bunshimura 2019